निसान छापको नक्सामै दार्चुलाको कालापानी गायब « Drishti News – Nepalese News Portal
निसान छापको नक्सामै दार्चुलाको कालापानी गायब
भाद्र २२, २०७५ शुक्रबार
काठमाडौं । सरकारले नै राखेका अधिकांश नक्सामा दार्चुलाको कालापानी छुटाएको पाइएको छ । निसान छापमै प्रयोग गरिएका नक्सामा समेत । नेपाली भूभाग कालापानीमा लामो समयदेखि भारतले सेना राख्दै आएको छ । यसमा भारतलाई साथ पुग्ने गरी सरकारी नक्सा बनाइएको छ । यसको नापी विभागले पुष्टि गरेको खबर अन्नपूर्ण दैनिकमा छापिएको छ ।
विभागका अर्का एक अधिकारीले नियोजित रुपमै गतल नक्सा प्रयोग भइरहेको बताए । ‘भारतले बनाएर नक्सा उपलब्ध गराइरहेको छ’, ती अधिकारीले भने, ‘यहाँ तिनै नक्सा प्रयोग हुने गरेका छन् ।’ उनका अनुसार गुगलमा खोज्दा सबभन्दा पहिले गतल नक्सा आउने गरेको छ । मन्त्रालय तहमा कन्सल्टेन्सीसँगको मिलोमतोमा नक्साको काम गराइन्छ । तर, त्रुटि पत्तो पाइँदैन । गल्ती हुनुको कारण यो पनि हो ।
‘भनिरहेछौं, वास्तै छैन’
उपमहानिर्देशक, नापी विभाग
सरकारका अधिकांश वेब साइटमा राष्ट्रको निसान छाप नै गतल प्रयोग भइरहेको रहेछ नि ?
– हो, सरकारका अधिकांश आधिकारिक वेब साइटमा प्रयोग भएका निसान छापमा भएका नेपालको नक्सा त्रुटिपूर्ण छन् । अधिकांश मन्त्रालयमा टाँगिएका नक्सा पनि गतल छन् । धेरैजसो पत्रपत्रिकाले छाप्ने नक्सा पनि त्यस्तै छन् ।
त्रुटि कसरी ?
– कालपानी नेपालमा नपरेको नक्सा प्रयोग भइरहेका छन् । सरकारको निशान छापमै राखिएको नक्सामा कालापानी छैन । सुस्तामा पनि समस्या छ ।
क्षेत्रफलको हिसाबले कति जग्गा नक्सामा समेटिएको छैन ?
– ठ्याक्कै यकिन त छैन । तर, कम्तीमा ६ हजार हेक्टर जमिन छुटाइएको छ ।
गलत नक्सा कसले बनाएको हो ?
– गतल नक्सा कस्ले बनायो र कसरी प्रयोग भइरहेको छ, हामीलाई जानकारी छैन ।
के यो नियतवश गरिएको हो त ?
– गतल मनसायले नै होइन त होला । प्राविधिक ज्ञानको अभावमा यसो भएको हुनसक्छ । म यसबारे यसै भन्न सक्दिनँ ।
सरकारले यसमा किन ध्यान नदिएको होला ?
– सरकार नै हामी हौं । हाम्रा तर्फबाट गरिरहेका छौं । तर, उच्च तहमा हुनुपर्ने गम्भीरता नभएको हो की ? यसभन्दा ठूला–ठूला एजेण्डा अरू होलान् नि त ।
यसलाई सुधार्न के गर्नु पर्ला ?
– हामीले आधारभूत नक्सा निःशुक्क दिएका छौं । त्यसमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय सीमा पनि प्रष्ट छ । त्यसलाई वेब साइटमै पनि राखेको छौं । हामीले दिएको नक्सा प्रयोग गर्नुहोस, तोडमोड नगर्नुहोस् । हामीले रेडियो नेपालमार्फत् पनि नक्साका सम्बन्धमा प्रचारात्मक कार्यक्रम गरिरहेका छौं ।